सरकारको आम्दानी १ खर्ब ७२ अर्ब घट्यो, खर्च ७० अर्ब कम - Yatra Daily
Home Headline सरकारको आम्दानी १ खर्ब ७२ अर्ब घट्यो, खर्च ७० अर्ब कम
काठमाडौं १६ असार । चालू आर्थिक वर्ष (आव)मा बजेट विनियोजन गर्ने क्रममा अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले गत आवमा भएको वास्तविक खर्चको तुलनामा करिब २२ प्रतिशत रकम बढाएका थिए ।
पहिलो महिनादेखि नै खर्च र राजस्वमा लागेको ब्रेक चैतपछि भने थप समस्या भयो कोरोना महामारीका कारण । ‘हुन त लक्ष्यअनुसार खर्च र आम्दानीमा केही कमी आएको थियो तर कोरोनाका कारणले पछिल्लो समय भने लक्ष्य पूरा गर्न गाह्रो देखियो,’ अर्थ मन्त्रालयका प्रवक्ता उत्तरकुमार खत्री भन्छन् ।
Previous articleआज पनि भारी वर्षाको सम्भावना !
Next article‘नेशनल पेमेन्ट गेटवे’ स्थापना अन्तिम चरणमा
वीरगञ्जलाई व्यवस्थित बनाउँन महानगरसँग मिलेर शुभ श्री जगदम्बा सिमेन्टले दियो १८० थान सडक डिभाइडर